Home » Akụkọ Njem Nleta » Mba ebe American Travel na ndekọ ọnụ ọgụgụ na enweghị ajụjụ a jụrụ
Mba ebe American Travel na ndekọ ọnụ ọgụgụ na enweghị ajụjụ a jụrụ
Gha site na US ma ọ bụ Russia na Turkey abụghị nsogbu. Ọtụtụ n'ime ụgbọ elu Turkish Airlines si n'ọnụ ụzọ US na-ahapụ ibu dị mma. Ọ bụ n'ihi na ma ndị America ma ndị isi Turkey anaghị echebara ya echiche.
Teethnweta ezé ma ọ bụ ntutu isi bụ ihe kpatara ọtụtụ ndị ọbịa America na Russia, ọrụ ndị dị otú ahụ dị maka ahịa na Turkey.
Onye nta akụkọ eTN na nso nso a si US gaa Turkey nọrọ izu 2 laghachiri, a jụghịkwa ya banyere ọnọdụ okpomọkụ ya na etu obi dị ya.
United Airlines jụrụ ya na Honolulu na ụgbọ elu ya na Chicago banyere COVID. N'otu oge na Chicago enweghị ajụjụ ọ bụla.
Mgbe ọ laghachiri, ọ nyochara akpa ya na Istanbul ruo Los Angeles na ụgbọ elu ya na Turkish Airlines na Munich na United Airlines na San Francisco na Los Angeles. O nwebeghị onye jụrụ ya otú obi dị ya. Ndị ọchịchị German ekweghị ya ka ọ bụrụ obodo ahụ ebe ọ si na mba dị elu (Turkey) gbagoo mba dị elu (USA)
Ọ banyere ụgbọ elu United Airlines na Munich na-enweghị ajụjụ ọ bụla ma gafere mbata na ọpụpụ na nkeji abụọ. Enweghị ule COVID dị mkpa,
Ọ nwere ike ịkọwa ihe kpatara ọnụọgụ ndị ọbịa na Turkey si na USA na Russia n'oge a.
Istanbul ka bụ obodo na-ekwo ekwo. Ogwe osisi na-emechi ugbu a na ngwụsị izu, mana enwere mgbe niile, na ọtụtụ ndị uwe ojii nwere ọtụtụ anya kpuru ìsì maka ihe kpatara ya.
Tourism na Turkey na-aga n'ihu na ndị ọbịa hụrụ n'anya na-aga mba na o siri ike ọ bụla mgbochi. Echegbula onwe gị banyere iyi ihe nkpuchi na nlegharị anya nlegharị anya.
Nanị anya anya bụ mgbe ị na-efe ụgbọ elu ikpeazụ a site na Los Angeles na Honoluluy. A choro ule COVID-19 ma ghara ibu okenye karịa ụbọchị 3. Otú ọ dị ule ndị dị otú ahụ enweghị ike ịnweta. Onye nta akụkọ anyị nwere ike ịnwale ule naanị ịga ụlọ ahịa ọgwụ na-enweghị ọkwa, mana nsonaazụ ahụ were otu izu iji laghachi. A gwara ya na Honolulu ka ọ debe iche iche ụbọchị 14.
Ugbu a Turkey gbanwere ụzọ ọ na-akọ kwa ụbọchị COVID-19 na-efe efe, ọ kwadoro ihe ndị otu ahụike na ndị mmegide na-enyo enyo ogologo oge - na mba ahụ na-eche oke nsogbu dị egwu nke na-agwụ ike usoro ahụike Turkey.
N'ime ihu, gọọmentị President Recep Tayyip Erdogan n'izu a maliteghachiri nyocha niile nke coronavirus - ọ bụghị naanị ọnụ ọgụgụ ndị ọrịa a na-agwọ maka mgbaàmà - na-agbanye ọnụ ọgụgụ nke ikpe kwa ụbọchị karịa 30,000. Site na data ọhụrụ, mba ahụ si na mba Europe kachasị emetụta na Europe gaa na nke kachasị njọ.
Nke ahụ abụghị ihe ijuanya nye Medicallọ Ọrụ Ahụike Turkish, nke na-adọ aka na ntị kemgbe ọnwa ole na ole gọọmentị gara aga na-ezobe etu mgbasa mgbasa ahụ nakwa na enweghị nghọta na-atụnye ụtụ na oke. Otu a kwudosiri ike na onu ogugu nke mịnịstrị ahụ ka dị ala ma e jiri ya tụnyere atụmatụ ya nke opekata mpe ọrịa 50,000 kwa ụbọchị.
Ọ dịghị mba nwere ike ịkọ ọnụ ọgụgụ ziri ezi gbasara mgbasa nke ọrịa ahụ ebe ọ bụ na achọpụtaghị ọtụtụ ọrịa asymptomatic, mana ụzọ gara aga nke ịgụta mere Turkey ka ọ dị ezigbo mma na ntụnyere mba ụwa, yana okwu ọhụụ kwa ụbọchị dị n'okpuru ndị a na-akọ na mba Europe gụnyere Italytali, Britain na France.
Nke ahụ gbanwere na Wednesde ka a na-ebukarị ihe a na-ebukarị ndị Tọki ugboro anọ site n'ihe dịka 7,400 rue 28,300.
Hospitalslọ ọgwụ dị iche iche nke mba ahụ agbatịwo, ndị ọrụ ahụike na-ere ọkụ na ndị ọrụ mgbazinye ọrụ, bụ ndị a na-akwụ ụgwọ maka idebe ntiwapụ ahụ na-agba mbọ, na-agbasi mbọ ike ịdebe nnyefe, Sebnem Korur Fincanci, bụ onye isi ndị otu ahụ, gwara ndị Associated Press.
Agbanyeghị na onye nlekọta ahụike etinyela ọnụego ebe obibi nke ICU na 70%, Onye na-ahụ maka Association nke Nọọsụ Nlekọta Nlekọta Istanbul, kwuru na akwa akwa ụlọ ọgwụ na ụlọ ọgwụ dị na Istanbul fọrọ nke nta ka ọ jupụta, yana ndị dọkịta na-achọ ịchọta ohere maka ndị ọrịa na-arịa ọrịa
Enwere ụkọ ndị nọọsụ na ndị ọrụ nọọsụ dị ugbu a agwụla.
Ọnwụ COVID-19 kwa ụbọchị na-arịwanye elu na ndekọ ọnụ ọgụgụ, na-eru 13,373 na Satọdee na ọnwụ ọhụrụ 182, na ngbanwe nke akụnụba maka mba a toro maka ijikwa idebe ọnwụ. Mana ọnụọgụ ndekọ ndị ahụ ka na-agbagha.
Onye isi obodo Istanbul Ekrem Imamoglu kwuru na mmadụ 186 nwụrụ n'ihi ọrịa na-efe efe n'obodo ahụ na Nọvemba 22 - ụbọchị gọọmentị kwupụtara naanị ọnwụ 139 COVID-19 maka mba ahụ dum. Onye isi obodo ahụ kwukwara na a na-eme olili ozu 450 kwa ụbọchị na obodo nke 15 nde ma e jiri ya tụnyere nkezi 180-200 edere na November afọ gara aga.
Koca ekwuola na ọnụọgụ ndị na-arịa ọrịa siri ike na ọnwụ na-arị elu ma kwuo na ụfọdụ obodo gụnyere Istanbul na Izmir na-enwe “oke nke atọ” ha. Otú ọ dị, Turkey ga-echere izu abụọ iji hụ nsonaazụ nke usoro ngwụsị izu na mgbochi ndị ọzọ tupu ị tụlee mgbachi ndị siri ike, ka o kwuru.
Ka ọ dị ugbu a, mba ahụ enweela nkwekọrịta ịnata ọgwụ mgbochi 50 nke ụlọ ọrụ ọgwụ China bụ SinoVac mepụtara ma nwee olileanya ịmalite inye ya ndị ọrụ ahụike na ọrịa na-adịghị ala ala na ọnwa na-abịa. Ọ nọ na mkparịta ụka ịzụrụ ọgwụ mgbochi nke Pfizer mepụtara na mmekorita ya na ụlọ ọrụ ọgwụ BioNTech. Otu ọgwụ ogwu mepụtara na Turkey ka akwadoro iji ya n'April.